अर्जुन गिरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । तर भारत भ्रमणका क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दल एमालेले तिव्र विरोध जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीसँगको संयुक्त पत्रकार...
फेक न्यूजवाट सतर्क रहौं
अर्जुन गिरी फेक न्यूज अर्थात झुटो समाचार । पछिल्ला वर्षहरुमा यसको जगजगी छ । चाहे अमेरिकि राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा होस् वा भारतीय निर्वाचनमा नै होस् । चर्चा फेक न्यूज अर्थात झुटो समाचारकै छ । उसोत शुरु शुरुमा प्रिन्ट माध्यमहरु पनि फेक न्यूजको शिकार भएका...
बलराम केसी / सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिमा उत्पन्न विवाद सल्ट्याइदिएको छ। प्रहरी प्रमुख योग्य, गैरराजनीतिक र सरकारको निर्देशन पालना गर्ने वा मनसाय बुझेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रहरी नियमावलीले पनि...
भुराजनीतिको गम्भीर खतरा
अर्जुन गिरी युरोपेली केही मुलुकमा चर्काे राष्ट्रवादको नारा घन्किएको सुनिन्छ । अढाई वर्षअघि भारतमै हिन्दूत्वमा आधारित राष्ट्रवाद स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू अघि आउनाले नरेन्द्र मोदीको विजय भएको हो । रुसमापनि पनि कट्टरपन्थ हावी भएको छ । भ्लादीमिर...
पूर्ण के.सी.(मुस्कान) मायाँ र प्रेम बिना न शान्ति मिल्छ न सन्तुष्टि , आजको ब्यस्त समयमा मानिस प्रेमको भोको छ । त्यसैले हरेक प्रेमीले प्रेमको उजागर गर्नुपर्छ । प्रेम दिवस एक अर्का प्रति ईमान्दारीता प्रकट गर्ने प्रेम दर्साउने विषेश दिन हो । यसले विश्वासको दुरि...
मुराहरि पराजुली / दुई–तीन वर्षअघि मेरा एक जना प्रकाशक मित्रले सोधेका थिए, ‘गरिबी र असमानतासम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू बताइदेउ त! आज एउटा बुक लन्चमा बोल्नुपर्नेछ।’ ‘वेबमा खोजे जति पनि पाइन्छ नि! विश्व बैंकको रिपोर्ट हेर, अक्सफामको हेर,’ मैले...
पूर्ण केसी ‘मुस्कान’ आजको युग भनेको सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको युग हो । सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले चेतनाका साथै समग्र मानवीय जीवनमा नै धेरै उथलपुथल ल्याएको छ । यसबाट पत्रकारिता पनि अछुतो रहन सक्ने भएन, त्यसैले आजको पत्रकारिता दिन प्रतिदिन नयाँ-नयाँ...